Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 1t l0113 lak
Eo anivontsika ny Mpahary
Alakamisy 03 Jan 2013
Vakio ny Jao. 2:7-11; 6:8-13; 9:1-34. Inona no ambaran'ireo andalan-teny ireo mikasika ny herin'Andriamanitra entiny mamorona?
Ny tsirairay amin'ireo fahagagana ireo dia ahitantsika taratra ny herin'Andriamanitra amin'ny tontolo hita maso izay Izy ihany no nahary azy.
Voalohany, inona no fizotran-javatra takina mba hanovana ny rano ho lasa divay/ranom-boaloboka avy hatrany? Tsy misy, araka ny fahafantarantsika azy. Eny, fanaovana asa ivelan'ny lalàn'ny zavaboary tokoa no nilaina, fara faharatsiny araka ny fahalalantsika azy ireny ankehitriny, ka nahafahan'i Jesôsy nanatanteraka ny asa nataony teto.
Teo amin'ny fahagagana momba ny hazandrano sy ny mofo indray, raha mofo dimy sy hazandrano kely roa no teo am-pelatanan'i Jesôsy teo am-piandohana, sakafo ampy nahavoky vahoaka maro be, niampy harona 12 nisy ny ambiny tsy lanin'ny olona, kosa no teo aminy tamin'ny farany. Atôma sy môlekiola no mandrafitra ireny sakafo rehetra ireny. Maro be ny atôma sy ny môlekiolan-tsakafo tamin'ny farany, mihoatra noho ny tamin'ny voalohany raha nanomboka nanome sakafo ho an'ireo vahoaka maro be Izy. Avy aiza moa ireo môlekiola fanampiny ireo, raha tsy avy tamin'ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra tamin'ny fomba mampiaiky volana?
Fanampin'izany, inona ireo fiovana ara-batana nitranga tamin'ilay lehilahy jamba rehefa sitrana izy? Jamba hatry ny fony vao teraka izy; araka izany ny atidohany dia tsy nandray hafatra avy tamin'ny maso mihitsy, hafatra nampitain'ny maso tamin'ny alalan'ny hoza-maso ('nerf optique') mba hanaitra azy (ny atidoha) hamorona sary. Noho izany, tsy maintsy natao izay hahafahan'ny atidohany mandray ny fampahalalana tonga miantefa aminy, ka hamorona sary mifandraika amin'izany ary hanazava ny heviny. Manaraka izany, tao amin'ny maso mihitsy no nisy zavatra tsy nety. Angamba tsy araka ny tokony ho izy ny fiforonan'ny môlekiola mpandray sary sasany, vokatry ny fiovana tao amin'ny 'ADN'-ny ('Acide Désoxyribo-Nucléique'). Na nisy fiovana nitranga angamba teo amin'ireo fototarazo ('gènes') izay mifehy ny fitombon'ireo faritra ao amin'ny maso - ny holatrola-maso ('rétine'), ny hoza-maso ('nerf optique'), ny voamaso ('cristallin'), sns, tamin'ny fotoana nahaterahany. Na nisy fahavoazana nitranga tamin'ny maso angamba izay nisakana azy tsy hiasa araka ny tokony ho izy.
Na inona na inona anefa tsipirian-javatra mikasika ny fahajamban'ity lehilahy ity, ny tenin'i Jesôsy dia nahatonga môlekiola hiforona tamin'ny toerana tokony hisy azy, namorona taova mpandray ara-zaraasa ('récepteurs fonctionnels'), fifandraisan'ny selan-kozatatitra ('neurones'), ary selan'ny atidoha, amin'izay ny hazavana miditra amin'ny maso dia hamorona sary, ary ilay lehilahy dia ho afaka hamantatra ireo sary izay tsy mbola hitany mihitsy talohan'izao.
Mahatalanjona ny fahagagana rehefa mitranga, kanefa inona no loza mananontanona rehefa ankininao amin'ireny ny finoanao? Amin'ny inona àry izany no tsy maintsy iankinan'ny finoantsika?